September 2021 - Achawlaymyar
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းခလေးတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်…
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းခလေးတိုင်းကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်… မိန်းကလေးအချို့က ဘရာဇီယာကို အချိန်တိုင်း၊ အချိန်ပြည့် ဝတ်ထားရတာကိုပဲ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘရာဇီယာက ရင်သားတွဲကျခြင်းနှင့် ရင်သားပုံ မကျခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အမြဲ ဝတ်ထားသင့်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ညအိပ်တဲ့ အခါမှာတော့ မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညအိပ်တဲ့ အခါမှာ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဘယ်လို ဆိုကျိုးတွေ သက်ရောက်နိုင်လဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့ အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ညအိပ်ချိန်မှာ တင်းကြပ်နေတဲ့ ဘရာဇီယာ ဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး ရင်သား ကြီးထွားမှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟော်မုန်းဓာတ် မညီညွတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှု အတက်အကျ မြန်ခြင်း … Read more
ရှက်စရာပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် ယောင်္ကျားလုပ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးဖူးလား ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပေးဖူးပါတယ် စလုပ်တုန်းကတော့ရှက်တာပေါ့ ဘဝမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးမှုတ်ပေးဖူးတာလေ..မသင့်တော်ဘူးထင်ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးအတွက် တကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းမသားဘက်က ကိုယ့်ယောကျ်ားကိုအားနာလို့သာ မလုပ်ခိုင်းရင်နေမယ် သူတို့အတွက်ကတော့ တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ် အချိန်တိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူး ရေမိုးချိုးသန့်စင်ပြီးမှ မှုတ်ပေးရတာပါ မဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးလေ.. နှစ်ယောက်သားရဲ့အချစ်ခရီးကို ပိုခိုင်မြဲစေတာမှန်ပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါ မှုတ်တဲ့အချိန်ကအသံထွက်နိုင်တာမို့ အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ် ကိုယ့်မိန်းမကိုမှုတ်ပေးနေပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်အယှက် ပေးမိသလိုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးလေ ညဘက်လူခြေတိတ်ချိန်ဆိုသိသာတယ်ဗျ စောစောလေးလုပ်ကြပါ ကြာကြာမှုတ်နိုင်လေ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းလေပါ..ဒါမဆံပင်တွေခြောက်ပြီး အအေးမမိတော့မှာလေဟုတ်တယ်မို့လား အတွေ့အကြုံရယ် Hair Dryer လေးရယ်တော့လိုတာပေါ့ zawgyi ရွက္စရာေပမဲ့ ေျပာရဦးမယ္ ေယာက်ၤားလုပ္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္မိန္းမကိုမႈတ္ေပးဖူးလား ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့လုပ္ေပးဖူးပါတယ္ စလုပ္တုန္းကေတာ့ရွက္တာေပါ့ ဘဝမွာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပထမဆုံးမႈတ္ေပးဖူးတာေလ..မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ခရီးအတြက္ တကယ့္ကိုလိုအပ္ပါတယ္ အထူးသျဖင့္ မိန္းမသားဘက္က … Read more
အေမနဲ႔အေဖ အသက္ ၄၅ ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ ဒါေတြဂ႐ုစိုက္ေပးပါ
အသက္၄၅ နဲ႔ ၆၀ ၾကားျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြက သတိျပဳရန္အသက္ႀကီးေလ ပိုျဖစ္ေလမို႔ သတိထားပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ကုသႏိုင္ဖို႔ သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္ …။ (1) အ႐ိုးေတြေခ်ာင္လာတယ္။ ဒူးနာတတ္တယ္။ ခ်ဥ္ဆီခမ္းလို႔ ဒူးေခ်ာင္တတ္တယ္။ ခါး႐ိုးဆစ္ေတြလည္း နာတတ္တယ္။ ေခ်ာ္လဲမက်ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဒူးကို ေကြးလိုက္ ဆန႔္လိုက္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ေျဖးေျဖး နာျခင္း သက္သာလာပါမယ္ …။ (2) ႂကြက္သားအားမရွိတာ အမ်ိဳးသားက ၃ ပုံပုံံ ၁ပုံ နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးက တဝက္ေလာက္ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ႂကြက္သားဆိုတာ လက္ေမာင္းႂကြက္သားနဲ႔ ေျခသလုံး ႂကြက္သား ၂ မ်ိဳးလုံးပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႂကြက္သားအားရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္ …။ (3) အေၾကာအဆစ္ နာတတ္တယ္။ ဝတဲ့သူမ်ား ပိုပီး … Read more
ဓာတ်မြေဩဇာ များ ဈေးတက်နေ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် အထောက်အကူပြု စေရန်အလို့ငှာ စေတနာဖြင့် ကူးယူတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် အလွယ်ကူဆုံး နွားချေးမြေဆွေးပြုလုပ်နည်း။ နွားချေး မြေဆွေး မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း အများအပြား ရှိသည့်အနက် တောင်သူတိုင်းအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မည် နွားခြေးမြေဆွေးပြုလုပ်နည်းအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နွားချေးမြေဆွေးပြုလုပ်ရာတွင် – ၁။ နွားချေး နှင့် အခြားသော သစ်ရွက်ဆွေး ၊ ကောက်ရိုးဆွေးများကို ရေလောင်းရလွယ်ကူပြီး မွှေရလွယ်ကူစေသော အရွယ်အစား ပုံထားပါ ၂။ ပုံထားသော နွားချေးနှင့် အခြားအရာများမှာ ခြောက်နေပါက ရေလောင်းပြီး အပေါ်အောက်လှန်ပေးပါ ၃။ ရေလောင်းပြီးပါက ပလပ်စတစ် အမဲ ဖြင့် နှစ်ထပ်သုံးထပ် ဖုံးအုပ်ပေးပါ ၄။ နှစ်ပတ်ကြာလျှင် ပလပ်စတစ်အားပြန်ခွာပြီး ရေလောင်း၍ အပေါ်အောက်လှန်ကာ ပြန်ဖုံးပေးထားရမည်။ ထိုအချိန်တွင် အပူချိန်အရမ်းမြင့်နိုင်သောကြောင့် သေချာစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ရမည်။ … Read more
(၂၃)နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့သမီးလေး ကိုယ်၀န်ရှိနေလို့ ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး။ကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။အမေလုပ်သူဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ။ ကောင်မ အဲ့ဒါ ဘယ်နွားလက်ချက်လဲအခုဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။နာရီဝက်လောက်ကြာတော့သူတို့အိမ်ရှေ့ကို Rolls-Royce တစ်စီးဆိုက်လာတယ်။ သားသားနားနားဝတ်စားထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။သူ ပြောတယ်။ မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့် ကျနော် သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် သူ သမီးလေးမွေးခဲ့ရင်ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခု၊ ဥယဉ်အိမ်ရာ၂ ခုနဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း ပေးပါ့မယ် သားလေးမွေးရင်တော့ စက်ရုံ ၂ ရုံနဲ့ဒေါ်လာ ၅ သန်း ပေးပါ့မယ်ဒီလို ကျနော် တွေးထားပါတယ် တကယ်လို့ ကေလး ပျက်ကျသွားရင်တော့ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲဆိုတာကျနော်မသိသေးဘူး ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ငါ့ညီမကြီး ပြောကြည့်လေ အမေလုပ်သူက ..ကမန်းကတန်း ပြန်ဖြေတယ်။ … Read more
NUG နဲ့ NLD အစွန်းရောက်တွေ ခင်များတို့ကိုယ်တိုင်တက်လာခဲ့လို့ ဆိုလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်း (ရုပ်သံ)
NUG နဲ႔ NLD အစြန္းေရာက္ေတြ ခင္မ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္တက္လာခဲ့လို႔ ဆိုလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္ ေဒၚလာေစ်း ေတြတက္ေနတာန႔ဲပတ္သက္ၿပီးလည္း ယခုလိုထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ေဒၚလာေဈးတက္တာက ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္ေတြပါဝင္သလို ႏိုင္ငံျခားကိုေငြေတြေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ စကစ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွာေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ” ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္ေတြပါတယ္ ျပည္သူေတြလဲ သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေငြေတြေရာက္ေနတာလဲပါတယ္” လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ ေဒၚလာေဈးတက္ျခင္းဟာ စစ္ေကာင္စီအာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တရိပ္ရိပ္ တက္လာျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ခုလို ဥပမာေပးေျပာဆိုသည္။ ” အသီးကမွဲ႔ေနတာၾကာၿပီး ေႂကြက်ခံနီးလဲျဖစ္ေနၿပီး ေႂကြက်တာေတာ့ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာေႂကြက်တာျဖစ္တယ္လို႔ ” သူကေျပာပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလအတြင္းမွာ ဆီေဈး ၊ ေ႐ႊေဈး နဲ႔ ေဒၚလာေဈးက အရင္ NLD အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ၃ဆေက်ာ္ … Read more
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဖခင်တစ်ယောက်ဟာ သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး လမ်းမထက်မှာ အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ အသက် (၄၅)နှစ်အရွယ် လက်သမားဆရာတစ်ယောက် ဟာ သူ့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ကုသဖို့ ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းခြယ်ပြီး သတို့သမီးတစ်ယောက် အဖြစ် ဝတ်စုံအပြည့်ဝတ်ဆင်ပြီး သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခအတွက် လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအလှူခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၄၅) နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Guo ဟာ အသက်လေးနှစ်အရွယ် မိတဆိုးသမီးလေး ရဲ့ သွေးကင်ဆာရောဂါပျောက်ကင်းစေဖို့ အတွက် ဆေးဖိုးအဖြစ်ယွမ်သိန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာကို ချေးယူပြီး ကုသခဲ့ပါတယ် ။ ခီမို ကုထုံး ကို ရှစ်ကြိမ်တိတိ ယူပြီးနောက်မှာ သမီးဖြစ်သူ ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားသယောင်ယောင်ရှိနေခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ ရောဂါထပ်မံဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့် … Read more
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ကိုရီးယားဘာသာစကား သင်ကြားပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားမော်ဒယ် “လီဆိုဟို”
ကိုရီးယားမော်ဒယ် လီဆိုဟိုကတော့ မြန်မာ့အရေးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ပါဝင်ကူညီနေတဲ့က ကိုးရီးယားလူမျိုးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဆိုဟိုက မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို အားတင်းထားဖို့ နဲ့ သူလဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးနေကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ အမြဲရေးသားပြီး အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လီဆိုဟိုက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တက်စွမ်းသမျှကူညီပေးနေတဲ့အပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်း တော်တော်များများသိထားတာကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ခဲနက် အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံအကျီကိုလည်း တမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ပြီး သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလည်း ဂုဏ်ယူစွာ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ လီဆိုဟိုက အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ ( NUG) အတွက် တရားဝင်အလှူခံခွင့် လက်မှတ်ရရှိထားတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “Bridge Of Peace To Myanmar၊ BOPTM ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လီဆောဟိုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနေ့အတွက် သတင်းကောင်းလေးကြေငြာချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ Bridge Of … Read more
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ ဒီလအတွင်း သူများကိစ္စကြားဝင်ကူညီခြင်း၊အာမခံခြင်း တွေကြောင့်အထူးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။လင်မယားကြား မိတ်ဆွေတွေကြား ဘယ်သူ့ကြားမှမဝင်မိပါစေနဲ့။ ဘယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခုကာလမှာ ရတာကနည်းနည်း ၊ပြဿ နာရှင်းရတာကများများဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများကျပျောက်ခြင်း သူခိုးခိုခံရခြင်းတွေကြုံနိုင်တယ်။ လူငယ်တွေအနေနဲ့ စီးပွားတွက် တွက်နေတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။ ချစ်သူကိုအချိန်ပေးဖို့ထက် ငွေနောက်ပဲလိုက်နေပါလိမ့်မယ်။အလုပ်မှာရန်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်ရှာနေသူများ အလုပ်ရဖို့ဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးသူတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး သိပ်မညံ့ပေမဲ့ ပညာရေးကံကြမ္မာကတော့ အညံ့ဆုံးအနေအထားကို ရောက်နေတဲ့ကာလပါပဲ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဘယ်သူကိုမှ မယုံသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အထူးဟော = ကံညံ့နေသည်။ ယတြာ = သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက် မွေးနေ့နံနက်မှာ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်နေလိမ့်မယ်။ အရာရာသတိထားဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေရပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့နေရာသွားရခြင်း၊နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်လူကြီးက မိမိအပေါ်အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်ရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်းစကားအခြေအတင်များရတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ ကူညီမှုအများကြီးရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ … Read more
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတွေကို ဘီအီးဒီဘွဲ့ပေးပြီး CDM ဆရာ၊ ဆရာမ နေရာတွေကို အစားထိုးဖို့ စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားတွေကို ဘီအီးဒီဘွဲ့ပေးပြီး လစ်လပ် CDM ဆရာ၊ ဆရာမ နေရာတွေကို အစားထိုးဖို့ စစ်ကောင်စီပြင်ဆင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တက္ကသိုလ်က နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား ၄၀၀ လောက်ကို ဘီအီးဒီ ပညာရေးဘွဲ့ ပေးပြီး CDM ဆရာ၊ ဆရာမတွေနေရာမှာအစားထိုးဖို့ စစ်ကောင်စီက ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ ရွာသစ်ကြီးမှာရှိတဲ့ အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဒုဝန်ကြီး စက်တင်ဘာ ၂၉ ညနေပိုင်းက လုံခြုံရေးအပြည့်အစုံနဲ့ရောက်နေပြီး ဘီအီးဒီပညာရေးဘွဲ့ပေးဖို့ကိစ္စနဲ့လည်းညဆက်စပ်နေတယ်လို့ သတင်းရင်းမြစ်အဆိုအရ သိရပါတယ်။ အဲဒီတက္ကသိုလ်ဟာ ပညာရေးဌာနလက်အောက်မှာ မူလကတည်းက မရှိဘဲ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပဲရှိနေခဲ့ပြီး အာဏာသိမ်းမှုမှာ ဆရာတွေရော ကျောင်းသားတွေ CDM မလုပ်တဲ့ အရေအတွက် အများဆုံးကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် ကောလိပ်၊ … Read more